japanSamachar | जापान समाचार | जापानका नेपालीको यो बडा दशैं - मन स्वदेशमा परदेशको बसाई
(Japan) 26 th February | 2020 | Wednesday | 4:05:51 PM || (Nepal) 12:50:51 PM
जापानका नेपालीको यो बडा दशैं - मन स्वदेशमा परदेशको बसाई
POSTED ON : Monday, 07 October, 2019 | Views : 1413
घटस्थापनाको दिनदेखी रेडियोमा बजिरहने मंगल धुन, घरमा घटस्थापनागरि राखिएको जमरा, नवदुर्गाको पुजा आराधना अनि घर लिपपोत गरि उज्यालो बनाउँदै गर्दा दशैंको नयाँ कपडा हातपरेपछि बल्ल दशैं लागेको अनुभुती हुन्थ्यो ।
प्राय फुलपातीको दिनसँगै टाढा रहेका परिवारजन, अग्रज र साथीभाईको आगमनले ग्रामिण क्षेत्रको रौनकतानै बढाउँथ्यो । पिगं हाल्ने चटारोसँगै देवी मन्दिरहरुमा भक्तजनको भिड अनि बिजया दशमीको दिनमा निधारभरी रातो टिका र शिरमा जमराले नयाँ लुगामा ठाट्टिँदाको दशैंको मजानै बेग्लै ।
मान्यजनको आशिर्वादसँगै दक्षिणामा पाईने नयाँ नोट अनि खुचुरा पैसा खल्तीमा बजाउँदै गाउँ चाहरेका भुराभुरीहरु देख्दा मन त्यसै फुरुगं हुन्थ्यो ।
दशैंको टिकाको दिनदेखी पूर्णीमाको दिनसम्म दशैंको टिका थाप्न आफन्तकोमा जानेको ताँती उस्तै देखिन्थ्यो ।
समय फेरियो, गाउँबाट सदरमुकाम हुँदै शहर अनि राजधानी समेत छाडेर परेदश पस्नेहरु दशक यता बढेको बढ्यै छन् ।
धेरै कहर थोरै रहरले बिदेशीएका नेपाली मनहरुले परदेश पसेपनि आफ्नो धर्म र संस्कृती अनि रितिरिवाज र परम्पराहरुलाई बिदेशी भूमिमै भएपनि बचाएरै राखेका छन् ।
अध्ययन, रोजगारी, परिवारको साथ, भ्रमण, व्यापार अनेक रुपमा बिदेशमा रहेका दशौं लाख नेपालीहरु मध्ये जापानमा रहेका नेपालीहरुपनी यो बडादशैं आ आफ्नो समयअनुकल पारेर मनाउँदैछन् ।
साथीभाई जमघट शुभकामना साटासाट गरेर दशैंलाई रमाईलो बनाउँदैछौं । अरु बेला कामको व्यस्तताले भेटघाट गर्न नपाएका ईष्टमित्रहरुसँग पनि यही दशैंको मौका पारेर भेट्ने समय तय भएको छ ।
साथै यही बेला साथिभाई घुमघाम पनि गर्नेछौं । परदेशमा स्वदेशको जस्तो खास दशैं त हुँदैन । मलाई लाग्छ यताको दशैं कृत्रिम हो ।
बचेको समयलाई हामीले यसलाई सांस्कृतिक महोत्सवको रुपमा लिएका छौं । नेपालमा विदा हुने भएकाले दशैको रौनकनै बेग्लै हुन्छ ।
जे जस्तो भए पनि बेफुसर्दीका कारण पनि हामीले दशैको महत्वलाई परदेशमा भए पनि गुमाउन दिएका छैनौं जस्तो लाग्छ । भावी पुस्तालाई पनि चाडपर्व बारे जानकारी दिन हामीले आफ्नो परम्परा र संस्कारलाई अंगालेर दशैं मनाउनुपर्छ ।
जापान आएको सात बर्ष भयो । पहिलो बर्ष जापानिज भाषा र काम सिक्ने क्रममा नै बित्यौ, केहि वर्ष बिताएपछि आपन्तहरुसँग भेटधाट गरी दशै मनाउदै आएका छौ । यसपटक सबै पत्रकार साथिहरुसँग संयुक्त मनाउने योजना छ ।
कामको समय मिलाउन गारो हुन्छ जापानमा तर पनि काम सकाएर भएपनि साथिहरु, आपmन्तहरु र जापान भएका साथिहरु विच भेट्ने हुदा सम्बन्धमा प्रगाढता थप्छ भने दशैंले सबैलाई जोडछ पनि ।
नेपाल हुँदा दशैंको समयमा सबै मिली आपm्नो घर, गाउँ टोल सबै मिलेर सफा गर्ने सबै मिलेर खुसियाली बाढ्ने गरिन्थ्यो । यसले समाजलाई जोड्ने र सबै मिलि आफु बसेको ठाउलाई सिगार्ने काम गरिन्थौ र बर्षौ पछि साथिहरुलाई पनि दशैले भेटाउँथ्यो ।
अहिले त अधिकाशं ठाउँमा संचारको पहुँच छ । त्यसैले कुराहरु भईरहन्छ । साथिहरुबाट पाईने शुभकामना समाजमा पहिचान बनाएका ब्यक्तित्वहरुबाट पाईने शुभकामना र आमा बाबा सहित परिवारबाट पाईने माया दशैको विशेष हो भन्ने लाग्छ । यस कार्यमा दशै विशेष हुने गर्दछ ।
यस पटक जापानमा आठौं दशैं मनाउँदैछु ।
यसो भन्दै गर्दा मनमा साह्रै नरमाईलो भने लागेको छ । जापान आएदेखि घर परिवार, इष्टमित्र साथीभाई सबैलाई अर्कोसालको दशैं संगै मनाउँला है भन्ने गरेको थिएँ, यसपाली पनि त्यसै भनें ।
यसपाली हाम्रो दशैं विशेष बन्ने भएको छ । परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन भएकोले दशैं महाउत्सव बनेको छ ।
यसपाली टिका लगाईन्न तर इष्टमित्र, साथीभाई भेटेर तास चाहीं खेलिन्छ ।
दशैं भन्ने बित्तिकै घरपरिवार, इष्टमित्र, साथीभाईसंगको भेटघाट, स्नेह, भाईचारा बढाउने पर्व हो भन्ने लाग्छ । नेपालमा हुँदा साथीभाईसंगको घुमघाम, खोलाको किनारमा खाएको बनभोज, तास, कौडा खेलेको क्षणको विशेष सम्झना आउँछ ।
दशैं हाम्रो बिशेष पर्व अनि संस्कृति हो । संसारको जुनसुकै कुनामा भएपनि यि बहुमूल्य संस्कृति हामी संगै रहन्छन् ।
बिदेशमै भएपनि आफ्नो हिसाबले पर्व मनाउनु, संस्कृतिलाई आत्मसाथ गर्नु हामी नेपालीहरूको अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । हिजोआज पर्वको नाममा होहल्ला मच्चाउने, छिमेकीहरूलाइ डिस्टर्ब गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू चाहीं गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । चाडपर्व मनाएर जापानीहरूमाझ हाम्रो संस्कृतिलाई परिचित गराउन तर्फ लागौं ।बिकृति, बिसंगतीले समग्र नेपालकै इज्जतमा दाग लाग्नसक्छ । यि र यस्ताकुराहरूमा सजग बन्दै चाडपर्व मनाउन अनुरोध गर्दै
यहाँहरू सबैलाई दशैं तथा तिहारको हार्दिक शुभकामना ।
म करिब ६र७ बर्सको मात्र थिएँ होला आमाले दर्जि बोलायर घरमै दशैंको लागि घरमा बस्दा लगाउन भनेर खल्ति भएको दौरा र सुरुवाल सिलाइदिनु भएको थियो । कुरा अस्टमिको दिनको हो खसि काटेर ठुलो बाटामा राखेर पिढिमा बुवा त्यसलाई बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यहि पिँढिको अर्को पट्टी दलिनमा पिङ हालिदिनुभएको थियो ।
त्यो दौराको खल्तिमा चिउरा हालेर चिउरा फाको मार्दै म पिङमा मच्चिएर त्यो बाटामा भएको खसिको मासु देख्दा मलाइ सन्सारकै सबै भन्दा खुसि यहि हो जस्तो लाग्थ्यो ।
मलार्इ अझै सम्झना छ त्यो रमाइलो मै मैले एउटा गित फुराएछु, आजको दिन क्या मज्जा आको रे खसि काट्या दिन भन्दै गीत गाउँदा बुवा आमा पनि धेरै खुसि हुनुभएको थियो ।
त्यो दिन सम्झँदा म आज पनि म त्यतिकै उत्साहित हुन्छु र त्यो दशैं मेरो जिवनको सबैभन्दा खुसिको दशैं थियो ।
म आज चाहेर पनि त्यो दिन फर्कासन सक्दिन ।
जापान भर्खरै आएकाले जापानमा यो नै मेरो पहिलो दशैं बन्दैछ । नेपालमा दशैं तिहार मेरो लागि सँधै विशेष नै रहन्थ्यो । सँधै दशैंमा परिवारका सबै मिलेर तास खेल्ने, सपिङ जाने परिवार आफन्तकोमा टिका लगाउने जाने सबै अहिले झलझली सम्झन थालेको छु । छोरि नेपालमै भएकाले उसलार्इ धेरै सम्झना गरिरहेको छु ।
सारै नरमाइलो भईरहेको छ परिवार बिनाको चाड मनाउदा कसलाइ पो रमाइलो लाग्छ र तैपनि जापानमा श्रीमान् सँगै दशैं मनाउन जमरा राख्नुका साथै बिदा पनि मिलाएकाले श्रीमान् र अरु साथिहरु सँगै बसेर टिका लगाएर रमाईलो गर्ने योजनामा छु ।
प्रवासमा सँधै काममा नै व्यस्त हुने भएकाले नेपालमा जस्तो भव्य तरिकाले दशैं मनाएको खास अनुभव छैन । कामबाट बचेखुचेको समय नेपाली साझा समाज मार्फत समाज सेवामा लाग्ने हुँदा छुट्टीको समय त्यतै बित्नेगर्छ ।
दशैं तिहारको बेलामा समाजको तर्फबाट बयोबृद्ध व्यक्तिहरु सहित नेपाली दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरुलाई भेला गराएर टिको टालो गरेर शुभकामना साटासाट गर्ने गरेका थियो ।
तर सबै आ आफ्नै घर परिवारसँग बसेर दशैं मनाउन व्यस्त हुने भएपछि उपस्थिति कम भएर अहिले गर्न छाडेका छौं । अहिले समाजमा आवद्ध साथीभाईहरु मात्र जम्मा भएर टिकाटालो गर्दै शुभकामना साटासाट गरेर रमाईलो गर्ने गरेका छनैं ।
गुन्माकेन क्षेत्रमा अन्य संघसंस्था र व्यक्तिहरुले आयोजना गर्ने दशैं कार्यक्रमहरुमा समेत बोलाउने भएकाले भ्याएसम्म सहभागी भएर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्नेगरेको छु ।
सबैले आआफ्नै तरिकाले समुह समुह भएर मनाउनु ठिकै मान्न सकिएपनि जुवा खेले जसरी पैसाकै लागि तास खेल्ने गरेको पाउँदा भने नराम्रो लाग्छ ।
चाँडबाड आउँदा आफन्त र परिवारजनलाई सम्झनु स्वाभाविक हो । नेपालमा त दशैंको टिकाको लागि भेला भएर रमाइलो बातावरणमा खुसियालीका साथ दशैको टिका टालो हुँदै होला भन्ने सम्झना आउने गर्छ । झन् आफु संग मन मिल्ने साथिहरुलाई सम्झँदा अहिलेनै एकपटक पुग्न पाएपनी हुने भन्ने मन हुन्छ तर बिदेशको बसाई भन्ने वित्तिकै कहिल्यै जाउन नपाईने रहेछ ।
नेपालीहरूको महान चाड दशैं तथा नजिकीदै गरेको तिहारको पावन अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मंगलमयम शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
बिरानो ठाऊ नौलो भाषा सबै पराई भएको ठाउँ बिगत ४ वर्षदेखी बाध्यता भनौ अथवा संघर्षका साथ घर परिवार भन्दा टाढा हुदै आएको छु ।
सुरुवाती बर्षहरुमा त भाषा कम आउने साथीभाई कम भएकाले दशैं तिहार चाड पर्व आउँदा अन्य साथीहरू बिदा लिने गर्थे भने म चै काम थप्ने गर्थे किनकी साह्रै नरमाईलो लाग्ने गर्थ्यो काममा हुँदा ब्यस्त भएर अलि मनलाई समाल्न सजिलो हुने गर्थ्यो । तर केहि वर्ष यता परदेशिएका दाजुभाईको पानी पधेरो जहाँ दुःख सुख साटासाट गर्ने एक चौतारी हाम्रो फेसबुक ग्रुप एमआरआर जापान टिमका दाजुभाईसंग मनाउँदै आएको छु । एक दिन बिदा मिलाइ सबै दाजुभाई भेटगरि अग्रज दाजु तथा हामी दाजुभाई बीच टिका साटासाट गरेर मनाऊदै आएका छौं । यस वर्ष पनि तेस्तै योजना छ ।
आगामी वर्ष चै परदेशिएका सम्पूर्ण नेपालीले दुःख सुख साटासाट गरि परदेशमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको साथ खोलिएको फेसबुक ग्रूप जनसहयोग जापानबाट नै इच्छुक दाजुभाई दीदी बहिनी आमा बुबा सबैलाई समेट्ने तरिकाबाट केहि कार्यक्रम गरि मनौने योजनामा छौं ।
तर जे जस्तै भएपनि परिवारबाट टाढा रहेको चाडपर्व खल्लो त भईनै हाल्छ । मिठो खाएपनि पीठो खाएपनि परिवारको साथमा बसेर मनाईएको दशैं सबै भन्दा रमाइलो लाग्छ । परिवारबाट टाढा भएपनि परिवारसंग भिडियोमा फोन गरेर दशैंको नियास्रो मेट्ने गरेको छु । यो दशैंमा नेपालमा भएका सबै साथीभाई, आफन्त र परिवारलाई फोन एसएमएस लगायतबाट दशैंको शुभकामना साटीराखेको छु ।
जय देश, जय परदेश !
जापान आएको पनि एकदशक विति सकेछ । जापान बसाईमा सुरुसुरुमा दशैं तिहार साह्रै नरमाईलासँग वित्ने गरेको थियो । सिमित चिनजान, नेपालीहरु भेट्न मुस्किल, रमाईलो गर्ने कार्यक्रमहरु पनि नहुने अनि नेपाली रेष्टुरेण्टहरु पनि पाउन मुस्किल ।
अझ नेपाली कम्पनीमा काम गर्दा त्यहाँकै कोठामा बस्दा बाहिर निक्लनै नपाईने खालको थियो । केही बर्ष यता सामाजिक कामहरुमा सक्रिय रहँदै जापानमा रहनुभएका धेरै दाजुभाई र दिदी बहिनीहरुसँग भेटघाट हुने मौका पाउँदा दशैंको खुशी पनि बढ्दो छ ।
यस पटक जापानमा नै दशैं मनाउने योजना सहित छोरा छोरी सहित परिवार यतै भेला भएका थियौं । तर परिवारमा दुखद घटना भएकाले यस बर्षको दशैं मनाउन नहुने भएको छ । जे भएपनि परदेशमा रहँदा नेपालमा रहनुभएका परिवारजन, साथीभाई आफ्नो देश र माटोको सम्झना हरपल आईरहन्छ । अझ दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडमा त आफन्त र साथीभाईहरुको सम्झना र मायाँले मन नै चसक्क दुखाउँछ ।
म जापान आएको ४ बर्ष भयो । दसैंमा पहिले कार्यक्रमहरु पारीराखिन्थ्यो यस्पाली भने त्यस्तो खासै केही छैन । यस् पटक साथीहरुसँग बसेर सामान्य टिका टालो गरेर मनाउने बिचार गरेको छु । त्यसको लागि काम बिदा पनि मिलाइसके ।
दसैं आयो भनेर मात्र नहूने आफ्नो बिदा मिल्नुपर्‍यो साथीभाइको पनि मिल्नुपर्‍यो अनी मात्र रमाइलो गर्न पाईन्छ । फेरी केही कम्पनी मा त पहिले थाहा पाएर फलानो दिन चाँही छुट्टी नराख्नु भन्ने सुचना आइसक्या हुन्छ ।
केही बर्ष अगाडि सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि गर्ने गरेका थियौं । यो पटक समय अभाबले तयारी पुगेन । परदेशमा दशैं आउँदा रमाइलो भन्दा बढी घरको यादले सताउने हुन्छ । अनी फेरी एस्तै त हो नि भन्यो चित्त बुझायो ।
कतिपय साथीका परिवारनै जापान मात्र हुनुहुन्छ उहाहरुलाई त रमाइलो नै हुने गर्दछ । कतिपय साथीहरु दसैंमा बिदा मिलाएर नेपाल फर्किसक्नुभयो । अब यही भाको साथोहरुसँग रमाइलो गरिन्छ ।
आफ्नो परम्परा कायम गरिन्छ तेइ नै हो राम्रो पक्ष । तर नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर दुई चार ग्लास ठाडो घाटि लगाएपछी साउजी गीत भएन, अझै ठुलो पार्नुस् साउण्ड् भन्दै जती सुकै सानो ठाउँ भए पनि दाँया बाँया ख्याल नागरि नाच्दिहाल्ने गरेको चाइ कस्तो कस्तो लाग्छ । तर फेरी सोच्यो रमाइलो गर्ने आ आफ्नै तरिका न हो ।
नेपालमा हुँदा त टिकाको भोलिपल्टै मामाघर टाप कसिन्थ्यो । मेरो त फेरी ६ जना मामा हुनुहुन्छ । एक जना मामाको घरमा २ घण्टा मात्र बस्यो भने पनि १२ घण्टा जान्छ । तेहि बहानामा दसैं भरी मामाघरमै बसिन्थ्यो अनी पुर्णिमामा मात्र घर फर्किईन्थ्यो ।
अब यहाँबाट घर फोन गर्ने के हुँदैछ, रागो कती धार्निको छ, जमरा सर्लक्कै उम्र्यो कि छोटै छ, मन्दिरमा लाइन कती लामो छ त्यस्तै त्यस्तै सोध्ने त हो ।
नढाटी भन्दा मैले दसैं र तिहारमा अहिलेसम्म नेपालमा केही कोसेली पठएको छैन, खर्च बेग्लै कुरो तर उपहार पठाएको छैन ।
सबैमा बिजया दशमीको शुभकामना भन्न चाहिँ कहिल्यै छुटाउँदिन ।
शताब्दीमै विश्वकै बिशाल बुद्धमूर्ति निर्माण जापान आएको ३ बर्ष भयो । म यता आउने समय दशैंको मुखैमा थियो । दु:ख सुख बर्ष दिन बिताएर बिजयादशमीको दिन बुवाआमाको हातको टीका थाप्नु मेरो सौभाग्य हुन्थ्यो तर यहॉको यो एेतिहासीक कामको लागि म दशैंको टीका र जमरालाई मनको खोपीमा संगालेर जापान उडें ।
म यता आईपुग्दा उता दशैं आईसकेको थियो । तर जापान आएपनि बिदेशमा मेरो पहिलो दशैं रमाईलै भएको थियो । फूकुओकामा नेपाली साथीहरुसँगको भेटघाट, एकआपसमा टीका ग्रहण र नाचगानले त्यो सालको दशैं सुखद नै भयो ।
त्यसो त नेपालमा रहँदा बुवाआमाको हातको टीकाबाट शुरु गरेर दशैंभरि टीका र आशिर्वाद थाप्दै हिंड्नुको सौभाग्य बिदेशमा हुँदा कहॉ पो मिल्ला र ! तरपनि आफूले भ्याएसम्म आफ्नो संस्कृतिलाई बिदेशमै भएपनि जोगाउदै लैजानुमा अद्भूत आनन्द छ ।
जापान आएको ५ बर्ष भयो । गत वर्ष नेपालमा नै दशैं मनाईएको थियो । बिगतका बर्षमा जापान मै बिबिध साङितिक कार्यक्रममा सहभागि भएर तथा आफ्नै साथीभाइसँग मिलेर मनाइयो ।
तर यो बर्ष आमा बित्नु भएकोले टिका हुँदैन । त्यसैले दशैंको लागी नेपाल जादिन यहि मनाउने विचारमा छु । पुर्णिमाको अघिल्लो दिन भने एनआरएनए विश्व सम्मेलनमा भाग लिनको लागी नेपाल जाने योजनामा छु ।
जापान आएको १२ बर्ष भयो । पहिला यति धेरै नेपालीहरू थिएनन् अहिले धेरै छन धेरै जनामा रमाईलो पनि छ ।
यसपाली आमाको हातको टीका लगाँउदै छु त्यो पनि जापानमा नै । यो नै सबैभन्दा खुशीको पल हुँदैछ ।
दशैं मनाउनुमा म सबै राम्रै देख्छु र यसलाई अझ धेरै रमाईलो बनाउन आफ्नो पायक पर्ने ठाँउमा सबै मानिस भेला भएर मनाउने गर्नु पर्छ ।
नेपालमा दशैं मनाउँदाका त्यस्ता क्षण हरेक बर्ष हुन्थे । पिङ खेल्नु, खड्ग कालिकाको मन्दिरमा गएर पुजा गरेको, तोरण तारेको त्यस्ता पलहरु झल्झली सम्झनामा आउँछन् ।
अचेल दशैं होस् वा तीहार जुनसुकै चाड आएपनि परिवार देखी साथीभाई सबैलाई फेसबुक बाटनै सजिलै सम्झना र कुराकानी हुने माध्यम बनेको छ ।
यो दशैंमा नेपालबाट आमा जापानमै आउनु भएकाले यो दशैं विशेष खुशीको बन्दैछ । मेरो कामना छ सबैको यो दशैं विशेष खुशीयाली बनोस् ।
जापान आएको १४ बर्षको इतिहासमा नेपालको परिवारहरु सगै बसेर दशैँ तिहार मनाउने सौभाग्य पाएको छैन । तरपनि हरेक साल अफिसमा बिदा मिलाई जापानमै रहेका परिवार आफन्त तथा साथीभाईहरु सँग एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गरि रमाइलो बाताबरणमा दशैँ तिहार मनाउने गरेको छु ।
भर्खर जापान आएको बेला नेपालीहरु अहिले जस्तो धेरै भेटिन मुस्किल थियो तर अहिले जापानमा नेपालीहरुको जनसंख्या बृद्धि सँगै बिभिन्न कार्यक्रममा जमघट गरि समुहगत रुपमा एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गरि दशैँ मनाउने प्रचलन बृद्धि हुदै गइरहेको छ ।
कुनै कुनै ठाउँमा त जापानिजहरुलाई समेत सम्मिलित गरि जापानिज हरुलाई नेपालको ठुलो चाडको बारे बताई सँगै मनाउने चलन पनि चलाएका छन ।
यो राम्रो पक्ष हो तर एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान रमाइलो मात्रै नगरी एक आपसमा झैझगडा होहल्ला गर्ने प्रबृति पनि उत्तिकै बृद्धि हुदै गइरहेको छ । यो दशैँ तिहार नेपालीको मात्रै चाड भएकोले जापानको नियम कानुनलाई पालना गरि एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गरि रमाइलो गरि मनाउनु हुन सबै नेपालीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।
उहिले नेपालको दशैँ तिहार आउनु निकै दिन अघि देखि नै गाउँ घरमा निकै रमाइलो बाताबरण छाउँथ्यो । मालती धुन दुर्गा कवचका श्लोकहरु गाउँघर भरि गुन्जन्थ्यो ।
घर सफा गर्ने लिपपोत गरि चिटिक्क पारिएको हुन्थ्यो । साथीभाईहरु सँग लिङ्गे पिङ, पिर्के पिङ खेल्दै साथीभाई सँग रमाइलो गरेको , दिनभरी रातभरी साथीभाई सँग देउसीभैलो खेलेको सम्झना गर्दा पनि अहिले निकै आनन्द आउँछ ।
वितेका वर्ष जस्तै यसपाली पनि हाम्रा महान चाड विजया दशमी र भाईटिकाले घरदेशको आगनी चुमीरहेका छन्। परदेशमा पहिले भन्दा अलिक फरक र रमाईलो चाही बढेको छ, साथीभाई र परिवारका मान्छेहरू बढ्नाले घरदेशको न्यास्रो अलिक कम भएको अनुभुती हुन्छ। तर यति लेख्दा(लेख्दै भने मन उडेर घर पुगीसकेछ ।
साच्ची भन्दा परदेशमा सबैकुरा पुगेपनि, आफन्त भएपनि परदेशमा चाडवाड संगै किन-किन खुसी आउँदैनन् उल्टै मन धेरै दुख्छ। खुसी हुनको लागि त केवल आफुले टेकेको धर्ती आफ्नै हुनु पर्दोरहेछ।
नेपालका प्रत्येक दशैहरू संझन लायक छन्, ति अतितका सुन्दर पक्ष हुन, अहिले ति दिनहरू सपना जस्तै लाग्छन्। खास गरेर वालपनका दशैं-तिहारहरूमा धेरै रमाईलो हुन्थ्यो।
दशैँ-तिहारमा घर परिवारलाई नसंझेरनवोले त अधुरो-अपुरोनै हुन्छ। नेपाल जाने धेरै मान्छे हुन्छन् यसपाली म आँफु जान नसकेता पनि आफन्त संग कोशेली पठाएको छु, त्यो केवल संझनु हो, बहाना हो, सन्तान नै नपुगे सम्म बा(आमाहरू कसरी खुसी होलान र !
डा. बिजय ज्ञवाली
दशैं मलाई मन पर्ने चाड हो । दशैं भित्रका पूजा, टिका, आशिर्बाद, मिठा परिकार यि सबैको महत्व छ । अझ ठुलाले सानाको शिरमा स्नेह पूर्वक स्पर्श गरेर दिने आशीर्बाद मलाई दशैंको सबै भन्दा मन पर्ने पक्ष हो ।
गाउँ भरी हामी १०/१२ परिवार एउटै कुलका दाजुभाई भएकाले दशैँमा निकै रमाइलो हुन्थ्यो । घर घर गएर टिका जमरा लगाउने आशीर्बाद लिने अनी सबै सकिए पछी मेरा थारु साथीहरु सित थारु नाच हेर्ने कार्यक्रम हुन्थ्यो ।
जापान आएको करीब ६ बर्ष भयो । बिदेशको दशै भएकोले खासै अन्तर देखिँदैन सबैजनाले आफ्नो गच्छे अनुसार नेपाली रीति रिवाज अनुरूप मनाऊँदै आएको जस्तो लाग्छ । यसपालि पनि साथीभाई संग बारबिक्यू गर्दै दशैको टीका आदान प्रदान गरी मनाऊँदैछु ।
बिदेशमा बसेर पनि नेपालीहरुले आफ्नो चाडपर्ब मनाएको देख्दा सारै खुशी लाग्छ ।
नेपालमा मनाएको दशै सबै सम्झनामा आऊँछ । घरपरिवार सबै मिलि एकसाथ मनाउनू अनि आफ्ना मान्यजनसँग अशिर्बाद पाऊनू नै सबै भन्दा बढी सम्झना आऊँछ ।
बिदेशमा परिवार नभएकोले परदेशमा हुने सबैको दशैं तीहार जस्ता चाडहरु खल्लो नै हुन्छ । किनकी हाम्रा पर्बहरु भनेको आफ्ना मान्यजनसंग आशिर्बाद लिने, परिवार तथा साथी भाई जम्मा भएर मनाऊने हो जुन बिदेशमा सम्भव छैन ।
जापान आएको लगभग १० बर्ष पुरा भयो ।
परदेशमा परदेशीलाई दशै सधै एउटै हो जस्तै लाग्छ । परदेशमा दशैं भन्नासाथ म आफैले गाएको गीत सम्झन्छु । आमा तिम्लाई संम्झेर रोए धुरू धुरू, दशैको शुभ साईतमै मेरो डिउटी सुरू ।
यसपाली पनि कामनै छ दशैंको दिन तैपनि काम सकेर आफ्ना केही मान्यजनको हातबाट टिका ग्रहण गर्ने सोचेको छु ।
जापानमा अरुबेला जस्तो नेपालकै महान चाड दशैंमा त्यती कार्यक्रम भएको पाउँदिन तर साथी भाई भेटघाट र शुभकामना आधान प्रदान त भैरहन्छ ।
सानो छँदा गाऊँमा लाईन बसेर टिका लाएको, मिठो मिठो खाएको, लिङगे पिङ खेलेको धेरै सम्झना आउँछु ।